तिमीले पुज्ने नारी उही हो , तिमीलाई जिबन भर बुझ्ने नारी उही हो – Nepal Reports
Home Opinion तिमीले पुज्ने नारी उही हो , तिमीलाई जिबन भर बुझ्ने नारी उही हो
April 16, 2017 Bigyan Kandel 0
तिमीले पुज्ने नारी उही हो , तिमीलाई जिबन भर बुझ्ने नारी उही हो
April 16, 2017 Bigyan Kandel
– आरती कँडेल
दैनिक जिबनमा जति पनि तिता-मिठा पलहरु व्यतित गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छन्, ति मिठा पल त शाहरुख खानकै शैलीमा स्वागत गरी व्यतित गर्ने बानी छ तर तिता क्षणहरुसंग जोडको तोड भएर लड्ने बानी अझै बसिसकेको छैन। केहि हदसम्म त लड्छु तर कतिपय पलहरु यस्ता हुन्छन् जसमा केवल मुन्टो फर्काएर हिंड्नु बेस लाग्छ।
त्यस्ता समस्याहरु ओझेल लगाउन त खोजिन्छ र लगाइन्छ पनि तर भित्रि मनमा कता-कता आफै लाछी भएको अनुभूति हुन्छ। आफै कम्जोर महसुस हुन्छ। अनि सहाराका रुपमा कलम र कपि समाएर लेख्न बस्ने गर्छु। गुम्सिएर रहेका भावना, रिस अक्षरमा उतार्ने गर्छु।
यस्तै दुई-तीन दिन अघि घटेको घटनाले कता-कता अशान्त बनाई राखेको थियो र त्यही अशान्त मनलाई अक्षरको सहारा दिन मन लग्यो।
कुरा यसरी सुरु भयो, कलेज सकेर साथीहरुको करमा घुम्न जाने भयौं। धेरै टाडा त पुगेका थिएनौं, लगभग चार मिनेट उता चोकमा पुगेपछि एकहुल भर्खर दश-एघारमा पढ्ने जस्ता केटाहरु देखिए। सोही हुलमा एक दुई हातले गन्न मिल्ने अलिकति उमेर नाघेका व्यक्तित्वहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। हो वहाँहरु सम्मानको हकदार हुनुहुन्थ्यो, उमेरले, त्यसैले यो शव्द सम्मानस्वरूप प्रयोग गरेको।
विस्तारै हामी हिड्दै थियौं, उनीहरु आफ्नै कुरामा मस्त थिए। जब उनीहरुले गरेका कुरा कानमा पुग्ने ठाउँसम्म पुगियो तब खै किन किन एकाएक मन झसङ्ग भयो। एकदमै डर लागेको महशुस भयो। उनीहरुका दश शव्दहरु मध्य छ शव्द गालीका थिए।
उनीहरु तथानाम गालीगलौजको शैलीमा बोलिरहेका थिए। ति हातमा गनिने हरु त मानौं, शव्दकोष थिए। डराउदै अगाडी बढ्दै थियौं, एक्कासी उनीहरु बिचको सभाको केन्द्रबिन्दु हामी हुन पुग्यौं। उनीहरुले हामीलाई यसरी जिस्काउन थाले कि मानौं हामी हरु जिस्काउनैका लागि त्यहाँ हिंडीएका हौँ। र त्यही हुलमा उपस्थित ठुला भन्ने हरु ? उनीहरु झन सिकाउंदै थिए, “केटा हो जिस्काउने त्यसरी हैन यसरी हो” हामी चुपचाप हाम्रै बाटो हिँडयौं र विस्तारै उनीहरुका आवाज पनि मन्द हुँदै गए। केही बेर बाहिर घुमेर हामी घर फर्कियौं।
म घर त आएँ तर मन भने कता-कता त्यही कुरामा अल्झिएको थियो। आखिर किन यस्तो? उनीहरुका दश शव्द केलाएँ, प्रत्यक शव्द अश्लिल। त्यो भन्दा पनि दुखको कुरा ति अश्लिल गाली केहि आमा माथि थिए भने केही दिदि-बहिनी माथि। उनीहरुले प्रयोग गर्ने गालीका हरेक शव्दमा केवल नारीको चरित्र समेटिएकोबारे बोलिएको थियो, विल्कुलै नराम्रो नियतका साथ।
म सम्पूर्ण पुरुष मित्रलाई यो सोध्न चाहन्छु, कुरा तपाईंहरुको, बहस तपाईंहरुको, रिस तपाईंहरुको, भन्ने तपाईं हरुले एक अर्कालाई तर प्रत्यक गाली गलौजका शव्द किन हामी नारी माथि? किन अश्लिल गालीहरुमा तपाईंहरु आमा, दिदि-बहिनीको अस्मिता र चरित्र माथि धावा बोल्नुहुन्छ ?
नारीले त्यस्तो के बिराएका छन् छ र तपाइंको झगडा बीच चरित्र उतारिन्छ उनीहरुको ? तपाईंलाई जन्माउने आमा हुन्। तपाईंलाई ममता दिने दिदि-बहिनी र सारा जिबन तपाईंका लागि अर्पण गर्ने तपाईंकि जिबनसाथी।
कुनै पुरुषलाई नारीलाई किटेर अश्लिल गाली बक्ने अधिकार छैन। तिमीलाई जन्माउने नारी उही हो। तिमीले पुज्ने दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती उही नारी हो, तिमीलाई जिबन भर बुझ्ने नारी उही हो। कतै तिमी ति गाली गलौजमा आफ्नै उपहास त गरिरहेका छैनौ ?
previous महानगर र मिडिया
next किन सतहमा आउँदैन पुरुषमाथिको हिंसा ?